Qaboojiyaha Deodorizer & Freshener - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
FAUCI qaboojiyaha Deodorizer & Freshener FAQ
Jawaab: firstMarka hore ka jar filimka aluminium ee baakadda, oo hawo geli 3 daqiiqo. Marka loo eego baaxadda qaboojiyaha iyo raacitaanka sharraxaadda badeecadda, ku shub dhammaan ama qayb ka mid ah alaabada granular weelka cylindrical oo leh dhexroor aad u yar. Kadib, ku rid daboolka koobka cylindrical oo leh dhexroor ka weyn jirka weelka, si adag u riix ilaa ay jirto dhawaaq “guji”, ka dibna hubi in alaabta oo dhan si adag loo adkeeyay. Kadib waxaad ku ridi kartaa qaboojiyaha oo aad bilaabi kartaa isticmaalkiisa.
5 5 saacadood ka dib, fur qaboojiyaha oo urkii iyo urtii way baaba'aysaa. Haddii weli ay jirto ur xooggan oo jeermis -dile, waxaad soo bixin kartaa weelka, ku qabsan kartaa daboolka sare hal gacan oo xoogaa ku jaji xariiq toosan oo ku teedsan dhexroorka dhowr jeer (oo aan hoosta ka fiiqin oo meerto) si aad u kala saarto daboolka jirka koobka. Marka la eego xaaladdaada gaarka ah, yaree qaar ka mid ah qalabka granular ka dibna ku xir daboolka oo mar kale ku rid qaboojiyaha.
Sidee badeecadani u ahaataa mid cusub oo qallajinaysa?
Jawaab: Way ka duwan tahay daboolkii udgoonkii caadiga ahaa ama alaabtii nuugista urta, FAUCI Deodorizer & Freshener wuxuu adeegsadaa maaddada jeermis-ka-dhiska si uu si firfircoon ugu sii daayo qodobka nadiifinta gaasta saafiga ah oo uu ku kala firdhiyo qaboojiyaha. Ku dhawaad ​​dhammaan noocyada bakteeriyada iyo caaryada dushiisa waa la dilaa, iyo waqti kasta si looga hortago taranka iyo taranka bakteeriyada cusub iyo wasakhaha, si loo gaaro saameynta badbaadinta cuntada iyo ka saaridda urta iyo urta halaagga.
Chlorine dioxide waa jiil cusub oo caalamku aqoonsan yahay oo leh hufnaan sare iyo jeermis dilaa ah. Maaddaama uu yahay ka -ilaaliye aad u fiican, waxaa si weyn loogu isticmaalay habaynta cuntada, baakadaha, kaydinta iyo gaadiidka;
Noocyada oksijiinta firfircoon ee ROS waxaa loola jeedaa walxaha oksijiinta ee firfircoon sida xagasha xorta ah ee hydroxyl iyo radicals free peroxy, kuwaas oo la jaanqaada walxaha ugu waaweyn ee dila bakteeriyada jirka bini'aadamka, waxaana ka dhasha kala -tagga iyo kala -soocidda biyaha. Waxtarka jeermis -diidka ee walxahaas oksijiinta ee firfircoon waxay ka sarreeyaan kuwa koloriin -hawo -mareen ah oo gaas ah. Xataa kan ugu adag in la dilo nooca bakteeriyada ah endospores-ka jira Dhulka, ROS isla markiiba wuu baabi'in karaa.
COVID-19 wuxuu ku noolaan karaa cuntada muddo dheer. Badeecadani ma dili kartaa COVID-19 iyo noocyada kala duwan?
Si kastaba ha noqotee, 4 -tii Febraayo, 2020, Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa soo saaray “Ogeysiiska Liiska Degdegga ah ee Qaar ka mid ah Daawooyinka Jeermiska ah inta lagu guda jiro Ka -hortagga iyo Xakameynta Cudurka Cusub ee Cudurka Sambabka ee Coronavirus”, jeermiska koloriin kaarboon ayaa lagu qorey alaab degdeg ah oo la isticmaalo ; 2020 Febraayo 19, 2005, Komishanka Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa soo saaray "Tilmaamaha Isticmaalka Daawooyinka Jeermiska" si looga jawaabo cudurka faafa, kaas oo liis gareynaya dawooyinka jeermiska kala duwan ee loo isticmaalo in lagu dilo Coronavirus -ka cusub. Liiskan, jeermis -dilaha koloriin ayaa lagu sheegay inuu ku habboon yahay jeermiska hawada.
Iyada oo la adeegsanayo bayaankan rasmiga ah ee kor ku xusan, waxay si dadban u caddaynaysaa waxtarka badeecadan ee dilaya Coronavirus -ka cusub, isla mar ahaantaana, ROS waxay leedahay hufnaan jeermis oo sareysa.
Jawaab: Inta badan badeecadaha la midka ah ee suuqa ku jira ayaa inta badan loo qaybiyaa nooca nuugista urta iyo noocyada daboola udugga. Alaabooyinkaani ma xallin karaan sababta asaasiga ah ee jiilka joogtada ah iyo urinta urta iyo urta u gaarka ah qaboojiyaha --- koritaanka bakteeriyada cuntada iyo caaryada. Sidaa darteed, marka laga soo tago awood la'aanta baabi'inta urta oo leh saameyn muddo-gaaban ah oo keliya, ma jirto saameyn keydin cusub.
Waxa kale oo jira xoogaa qaboojiye cusub oo qaboojiye ah iyo alaab qallajinaysa oo ay ku jiraan aashitada hypochlorous iyo fungicides chlorine dioxide, laakiin xadka tiknoolajigu wuxuu ka dhigayaa daaqad wax ku ool ah. Isla mar ahaantaana, aashitada hypochlorous waxay leedahay sumad gaar ah oo sumoobid ah, iyo jeermiska koloriin oo keliya ayaa ka tayo yar badeecadeena, sidaa darteed xoog -saarid sare ayaa loo baahan yahay. Aad u sarreeya diirada koloriin dioxide ma aha doorasho ka fiican.
Qalabka FAUCI AAPG ee ku dhex jira FAUCI qaboojiyaha Deodorizer & Freshener waxay korsadaan tikniyoolajiyadda oksijiinta firfircoon ee ROS iyo teknolojiyadda teknolojiyad si tartiib-u-sii-deyn ah oo madax-bannaan oo ay soo saartay shirkaddeena, taas oo si tartiib tartiib ah oo xasilloon u sii deyn karta badbaado iyo hufnaan maaddooyinka koloriin dioxide gaas kiimiko ah iyo ROS oksijiin firfircoon ions muddo dheer.
Factor Qodobka jeermis -dilista ee FAUCI Fridge Deodorizer & Freshener waa koloriin gaasiin gaas leh iyo ROS oksijiin firfircoon, oo leh hufnaan iyo badbaadin jeermis sare; halka alaabooyinka kale aysan lahayn ROS oksijiin firfircoon, waxaana jiri kara gaas -biyood hypochlorous gaseous, koloriin iyo walxo kale oo sun ah oo uu mamnuucay taabashada bini'aadamka, taas oo aan lahayn oo keliya hufnaan jeermi -dilid, laakiin sidoo kale leh khataro badbaado;
UC FAUCI qaboojiyaha Deodorizer & Freshener wuxuu leeyahay saameyn joogto ah muddo 3 bilood ah, halka badeecadaha kale ugu badnaan yihiin 1-2 bilood.
Sida badeecadaha qaarkood ee isticmaalaya ozone, dhibaatada ugu weyni waxay tahay in ozone uu yahay mid sun ah, xanaaqsan oo wax u dhimaya deegaanka. Alaabtayada ma soo saarto wax ozone ah.
Alaabtan ma ammaan tahay in loo isticmaalo jirka aadanaha iyo alaabta cuntada?
Jawaab: Heerka raad-raac ROS ee oksijiinta firfircoon ee laga soo saaray dusha alaabta lagu dhisay FAUCI AAPG ee badeecadani waxay la mid tahay walaxda ugu muhiimsan oo aan kala maarmi karin jidhka bini'aadamka oo disha fayrasyada iyo bakteeriyada. Sidoo kale waa walax dabiici ah waxayna ku jirtaa xadka raadraaca. Waa mid waxtar u leh oo aan waxyeello u lahayn jidhka bini-aadamka, sidoo kale waa mid aan sun ahayn oo aan dhib u lahayn cuntada;
Isla mar ahaantaana, FAUCI qaboojiyaha Deodorizer & Freshener (oo ku dhex jira FAUCI AAPG walax) ayaa maray imtixaankii CMA/CNAS ee ku habboonaa: gabagabada tijaabada sunta neefsashada ee ba'an waxaa lagu muujiyey inaysan sun ahayn; gunaanadka tijaabada micronucleus -ka unuggu dhammaantood waa taban yahay, taas oo macnaheedu yahay inaysan jirin isku -beddelidda unugyada unugyada iyo sumowga hidda -socodka;
ShouldWaa inaan lagu qasin jeermis -dile kale oo alkaline ah ama walxo dabiici ah.